ဘဝကမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Coronavirus - ဒါကနောက်ခြောက်လအတွက်သင့်ဘဝဖြစ်လိမ့်မည် - SANTE PLUS MAG
Tele RELAY တစ်ခု AVR 10, 2020 0
Alors que les Français entament leur 3ème semaine de confinement, le coronavirus continue sa propagation à travers le globe. Nous comptons aujourd’hui 1 396 631 cas d’infections à travers le monde pour 79 506 morts. Dans cette nouvelle…
မင်းသားဟယ်ရီသည်မေဂန်နှင့်အတူဘ ၀ သစ်အဖြစ်ဘုရင့်မိသားစုသို့…
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းဆိုင်ရာသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်သည်' Prince Harry သည်အသက် ၃၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ဇနီး Meghan Markle နှင့်အတူတော်ဝင်အကြီးအကဲရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယ - Coronavirus ၀ န်ကြီးချုပ်မိုဒီသည်နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။
နယူးဒေလီ။ ။ ၀ န်ကြီးချုပ် Narendra Modi ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှပါလီမန်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအခြေအနေသည်သမိုင်းတွင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Wuhan coronavirus ပိတ်ဆို့မှုအဆုံးသတ်တော့မည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်တရုတ်သည် coronavirus ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့သော Wuhan မြို့ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးသောင်းနှင့်ချီသောလူများကိုသေစေသည့်အင်အားကြီးသောကူးစက်ရောဂါသင်္ကေတသည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့သည်။
coronavirus အကျပ်အတည်း၏ Cuomo က“ ဒါဟာဘဝကိုခံစားရတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
မနေ့ကမှ စတင်၍ ဆေးရုံတက်ရသောလူသစ်အရေအတွက်တိုးများလာနေသည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့သုံးရက်ကြာပျမ်းမျှကိုသင်ကြည့်လိုက်ရင်သုံးရက်ကြာပျမ်းမျှကျဆင်းသွားတာကြောင့်သတင်းကောင်းပါပဲ။ သူ ...
Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်ဘ ၀ ဖြစ်ပြီးနောက် & # …
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားပြီးပြီ' တော် ၀ င်စာရေးဆရာ Leslie Carroll က LA. သို့ထွက်ခွာရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာယူကေဗြိတိန်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဟောလိဝုဒ်အလှတရား၏အမည်ပြောင်ဖြစ်သော်လည်း Aquaman ကြယ်ပွင့်များ၏ privacy သည်အထူးသဖြင့်လိင်တူမေထုန်ပြုခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းကိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုပင်အလွန်ဆူညံနေသည်။
ဘရွတ်ကလင်ရှိ Coronavirus: ICU သည်ဘဝတိုင်းအတွက်တိုက်ပွဲ - နယူးယောက်တိုင်းမ်
ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်ဒေါက်တာ Vasantha Kondamudi ကနောက်ပိုင်းတွင်ဤသို့အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည် - ၀ န်ထမ်းများမှာတိုသည်၊ ဆရာဝန်များသည်နေ့တိုင်းဖျားနာခြင်းနှင့် Covid-19 သံသယရှိသူသို့မဟုတ်အတည်ပြုခံရသည့်လူနာအရေအတွက်သည် ...
အဆိုပါကောလိပ်ကသူတို့ကိုတန်းတူခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်သူတို့၏ဘ ၀ များ၏မညီမျှမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ - အသစ်…
ဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းတွင် coronavirus သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ခရီးသွားစဉ် Ms. Lanning မှလာမည့်စာသင်ချိန်တွင်သူမသည်သင်ကြားရေးလက်ထောက်ဖြစ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းစကားကိုတွေ့ခဲ့သည်။ အသင်းဖော်နှစ်ခုက…
သိကောင်းစရာများ - သင့်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်အသုံးဝင်သောအိမ်သုံးပေါက်ပေါက် ၃၃ ခု
123 ... 21 လာမယ့်